Igumbi elizimeleyo kuphela ukusuka ngoLwesihlanu ukuya ngoMvulo
Igumbi lakho lokulala e indlu engasemva sinombuki zindwendwe onguJacques
IDolophu endala kunye neziko lembali likumgama weekhilomitha ezi-3 kuphela. Kufuphi, 500 m kude iziko umboniso Forum Friborg kunye Casino Barrière imidlalo igumbi.
Ifakwe kwi-2 km ukusuka ekuphumeni kwendlela yemoto i-A12 Friborg-Nord, isikhululo seCFF imizuzu eyi-12 ngebhasi kunye nemizuzu engama-20 ngeenyawo.
Com amaziko ama-300 m kude (Migros, Coop, kunye ne-Mediamarkt) Indawo yokutyela yaseCoop ivula kude kube yintsimbi yesi-7 ngokuhlwa ngoMvulo-ngoLwesibini-Lwesithathu kwaye kude kube yintsimbi yesi-9:00.
Umgca webhasi 1 (Portes de Friborg-Marly Gérine) 300 m ukuya kumbindi wesixeko.
Eli gumbi lineshawa kunye ne-WC, elizimeleyo ngokupheleleyo, libekwe kumgangatho osezantsi. Uxolo kunye nomnini luqinisekisiwe. Uqhagamshelwano olumnandi kunye olukhawulezayo ekufikeni nasekuhambeni, ukusetyenziswa kweqonga lemibuzo ... Ibhedi enkulu ye-160/200 imnandi kubantu aba-2.
Isitovu sombane esincinci, i-microwave, ipani kunye neketile inokupheka amanzi okanye ukufudumeza into elula. Akukho nkonzo yasekuseni (ngaphandle kokuba kunokwenzeka ukwenza ikofu okanye iti), isonka okanye i-croissants inokuthengwa kwi-300 m kude (i-Coop / ivenkile ye-Migros / okanye kwizikhululo zepetroli ezi-2.
4.93 · Izimvo eziyi-182
Ngaphambi kokuba ubhukishe, nceda ucace malunga nayo yonke into enikezelwayo kubonelelo lwale ndawo yokuhlala. Enkosi.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Granges-Paccot